မုန့်လက်ကောက်ကြော် | Wutyee Food House
« ဖြဲသိပ်မုန့် လုပ်စားကြရအောင်
Wasabi ပုဇွန် »
February 24, 2010 by chowutyee မုန့်လက်ကောက်ကြော် တူတူလုပ်စားကြရအောင် မုန့်လက်ကောက်ကြော်ကို အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ပြီး စိတ်ကြိုက်စာသုံးနိုင်အောင် တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နေ့လည်စာ အစာပြေအဖြစ် အချိန်တိုအတွင်း တူတူလုပ်စား ကြရအောင်….
၂။ ဆန်မှုန့် – ၄၀ ဂရမ်
၃။ ဆိုဒါ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၄။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံ ၁ပုံ
၅။ ထန်းညက်(မုန့်လုပ်ထန်းညက် အမဲ) – ၆ခု
၆။ ကုလားပဲ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (ပြုတ်ပေးပြီး ပြန်ထောင်းပေးပါ)
၂။ ပြီးမှ ဆိုဒါ၊ ဆား၊ ကုလားပဲ၊ ရေတစ်ခွက်ခန့်ကို နည်းနည်းခြင်းဆီ ထည့်ပေးပြီး မပျော့မမာ အနေထားထိ ရောက်အောင် သမအောင် နုယ်ပေးပါ။
၃။ မုန့်စေးလာလျှင် အရှည်အတုံးလေးများကို လက်ဖြင့်လိမ့်ပြီး အရှည်လိုက်အကွင်းကလေးများ ပြုလုပ်ပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ဒယ်အိုးထဲ ဆီများများထည့်ပြီး ဆီတော်တော်ပူလာလျှင် အကွင်းလေးများကို အညှိရောင် သန်းလာသည်အထိ မီးအသင့်တင့်ဖြင့် ကြော်ပေးပါ။
၅။ မုန့်ကွင်းများ ကျက်လျှင် ဒယ်ထဲမှ ပြန်ဆယ်ယူထားပါ။
၆။ မုန့်ကွင်းကြော်နေစဉ်အတွင်း ဒယ်အိုးတစ်ခုထဲ ရေတစ်ခွက်ခန့်ထည့်ပြီး ထန်းညက်များကို ထည့်ကျိုပေးပါ။
ရ။ ထန်းညက်ကျိုသည့်ထဲသို့ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ပုံ၁ပုံ) ထည့်မွှေပေးပြီး ထန်းညက်ရည် စေးကပ်အောင်သည်အထိ ကျိုပေးပါ။
၈။ ပြီးလျှင် ကြော်ထားသော မုန့်လက်ကောက်ကြော် နှင့် ထန်းညက်ရည်ဖြင့် တွဲဖက် နေ့လည်စာ အစာပြေအဖြစ်စားသုံးနိုင်ပါပြီး.
မှတ်ချက်။ ။ မုန့်လက်ကောက်ကို ထန်းညက်ရည်စိမ်ပြီး စားချင်လျှင် မုန့်လက်ကောက်ကြော်ကို ကြွပ်အောင်ပိုကြော်ပါ။ ပြီးမှ ထန်းညက်ရည် အေးလာလျှင် မုန့်ကို အတန်ကြာစိမ်ထားပြီး စားသုံးနိုင်ပါသည်။
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 8 Comments	8 Responses
on February 24, 2010 at 11:37 am | Reply Hmone Gyi
sar chin like tar nawahint ahint…
on February 24, 2010 at 11:54 am | Reply chowutyee
မှုံကြီး ကိုယ်ကလည်း လွယ်တာပဲ လုပ်စားပါ့လား..
on February 24, 2010 at 1:39 pm | Reply Thet Htar
Hinn i lal sar chin tal ,ygn youk tone ka lar ma sar lite tar marr thwar tal😦
on February 24, 2010 at 2:23 pm | Reply chowutyee
haa, friend, လုပ်စားကြည့်ပါလား လုပ်စားရလွယ်ပါတယ်..း)
on February 24, 2010 at 2:37 pm | Reply ei thet
sar mae naw sis , like it so much…
on February 24, 2010 at 2:50 pm | Reply chowutyee
မအိသက် များများ စားသွားပါနော်..း)
on February 24, 2010 at 9:45 pm | Reply Sabae
နှမ်းကပ်ကြော်ကိုလဲ ဒီတိုင်းပဲကို ပုံစံပြောင်းပြီး နှမ်းထည့်လိုက်ရင် ရမလား…:)
on February 25, 2010 at 5:06 am | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် အစ်မ.. မကြော်ခင် နှမ်းထည့်ထားတဲ့ ပန်းကန်ထဲ မုန့်လုံးကို နှမ်းအရင်ကပ်ပြီးမှ ကြော်လိုက်ရုံပဲ .. တူတူပါပဲး)